Captain America မော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
06 / 09 / 2021 06 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 131 Views စာ0မှတ်ချက် 71031, 71031 Marvel စတူဒီယို, Captain America, ကလင် Barton, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Marvel, Marvel ဖုတ်ကောင်, ပိုစတာ, စတိဗ်ရော်ဂျာ, ကဗျာ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဖုတ်ကောင်, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey, ဖုတ်ကောင်
01 / 09 / 2021 01 / 09 / 2021 ခရစ် Wharfe 164 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Loki, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, သေးသေးလေး, မော်နီကာရက်ဘို, Sylvie, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, Scarlet စုန်းမ, အဆိုပါမျှော်မှန်းချက်, အဆိုပါဆောင်းရာသီ Soldier, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey
01 / 09 / 2021 01 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 117 Views စာ0မှတ်ချက် 71031, 71031 Marvel စတူဒီယို, Captain America, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Loki, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, Spider-Man, Sylvie, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
26 / 08 / 2021 27 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 177 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, Captain America, Captain America: The First Avenger, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney+, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Marvel, သေးသေးလေး, Peggy ကို Carter, အနီရောင် ဦး ခေါင်းခွံ, စတိဗ်ရော်ဂျာ, အဆိုပါ LEGO Group, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
24 / 08 / 2021 24 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 161 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, သေစားသေစေသောစည်းဝေးပွဲ, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, Black ကမုဆိုးမ, Captain America, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney+, Hawkeye, hulk, သံမဏိလူသား, အောင်နိုင်သူ Kang, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, သေးသေးလေး, Thor, Thor: Ragnarok, Thor: The Dark ကမ္ဘာ့ဖလား, Throg
24 / 08 / 2021 24 / 08 / 2021 ရော့ Paton 288 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney, Disney+, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယို, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Loki, Marvel, သေးသေးလေး, မော်နီကာရက်ဘို, Sylvie, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, Scarlet စုန်းမ, အဆိုပါမျှော်မှန်းချက်, T'Challa စတား - Lord, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဆောင်းရာသီ Soldier, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey
23 / 08 / 2021 24 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 244 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Avengers, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, Avengers: Infinity စစ်ပွဲ, Captain America, Captain America နှင့် Winter Soldier, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, hulk, Lego, Lego Avengers Endgame, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Marvel, Marvel's Avengers Infinity စစ်ပွဲ, စတိဗ်ရော်ဂျာ, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, အဆိုပါဆောင်းရာသီ Soldier
LEGO 71031 ဆိုတာဘယ်သူလဲ Marvel Studios 'Captain America?
22 / 08 / 2021 23 / 08 / 2021 Rachael ဒေးဗီးစ် 155 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Captain America, Lego, LEGO Group, Lego မှ marvel, LEGO.com, Marvel, အဆိုပါ LEGO Group
LEGO ၇၁၀၃၁ Marvel စတူဒီယိုများသည် MCU ၏ဒုတိယ Captain America ၏ minifigure version ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်၊ သို့သော် Sam Wilson သည်မည်သို့ယူလာခဲ့သနည်း။